आज २०७७ भदौ १८ गते बिहीबारको राशिफल – Dainik Sangalo
September 3, 2020 400
आज २०७७ भदौ १८ गते बिहीबार। ज्योतिष शास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? ज्योतिषी एस्ट्रो राजले यस्तो फलादेश गर्नुभएको छ-
Prevसभामुखको पहलमा अभिभावक गुमाएका बालवालिकालाई संरक्षण र शिक्षा
Nextआइसोलेसनमा बस्ने कोरोना सङ्क्रमितले निस्तै खाना खानुपर्ने बाध्यता